XZ1350 Isakhiwo se-HDD samkela i-chassis yokukhasa, it isebenzisa ukonga umbane inkqubo evaliweyo hydraulic, mayixhotyiswe electro-ngesanti kubunzulu baphantsi ulawulo, kakuhle phambili umthwalo uvakalelo kunye XCMG kaThixo patent zobugcisa. Iinkcukacha eziphambili zobuchwephesha zifikelela kwinqanaba eliphezulu kumazwe aphesheya. Izinto eziphambili zenkqubo ye-hydraulic, ukuhanjiswa, inkqubo yombane kunye nebhokisi yebhokisi yenziwe ngeemveliso zeempawu zokuqala zehlabathi, ukusebenza kakuhle, ukuthembeka okuhle.
Iimpawu Ukungeniswa kweXZ1350HDD
2.The yokubeka push-tsala uhlobo, ukudluliselwa oluzinzileyo noluthembekileyo, amandla intloko edibanise uhlobo edadayo nokuphakamisa drill umbhobho ubomi intambo.
Itekhnoloji yokukhusela i-4.Overload, ukubola kwe-torque yokujikeleza, amandla okunyanzela kunye nokuqinisa amandla okubopha zonke ziyahlengahlengiswa kwaye zamkele itekhnoloji yokulawula uxinzelelo lwedijithali, efanelekileyo kwaye elula ukuyilungisa kwaye inokucwangciswa ngokuchanekileyo.
Imoto ejikelezayo LIYUAN
Ukunciphisa iRotary ICSC
Push Imoto LIYUAN
Push ukunciphisa ICSC
Phatha P + G
Isantya sokunciphisa isantya Doosan
XZ1350 Ukuqala komatshini weHDD xa uhamba noluhlu lokupakisha, kubandakanya la maxwebhu alandelayo:
Egqithileyo XZ1000A tyaba zemiyalelo zokomba rig
Okulandelayo: XZ2200 oxwesileyo zemiyalelo zokomba rig
ICatwalk Drilling Rig